Mid ka mid ah xildhibaanada cunsuriyiinta SD oo isaga baxay xisbiga | Somaliska
Mid ka ah mid ah xildhibaanada ugu jira baarlamaanka xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) ayaa go’aansaday in uu xisbiga isaga baxo oo uu noqdo xildhibaan madax banaan. Xubnaha kale ee xisbiga ayaa arintaas ka biyo diiday oo dalbaday in uu soo wareejiyo kursigiisa.
Xildhibaankaan oo ah wiil 22 sano jir ah oo lagu magacaabo William Petzäll ayaa dhowr bilood ka hor lagu canaantay ka dib markii uu qalalaase ka sameeyay guriga saaxiibtiis. Ka dibna waxa uu go’aansaday in uu xisbiga SD isaga baxo oo uu noqdo mid madaxbanaan taasoo xubnaha SD ee baarlamaanka ka dhigeysa 19 xubnood.
Xubnaha kale ee SD ayaa sheegay in wiilkaan uu dalbaday lacag fara badan in la siiyo haddii ay doonayaan in uu kursiga soo celiyo.
Wiilkaan ayaa sheegay in uu doonayo in kursigiisa uu u isticmaalo in uu wax ka qabto arimaha dhalinyarada iyo alkolada. Arintaan ayaa ah dhabarjab ku yimid xisbiga SD oo ka dib weeraradii ka dhacay Norway dhulka galay. SD ayaa u badan dhalinyaro aan waayo aragnimo ku lahayn siyaasada .
waa arin lagu farxo in ee sii yaraanaan cunsiiyiinta
waxaan dhihi lahaa inta dhiman haka baxaa si codkooda u yarado
waa arin farax noo ah in cunsurtu baa bado, oo xisbiga sociel kuna sere ukaco
tack så mycket xildhibaanka
Faanoole Faru kama qodna Adeer åkesson oon iska casilin xilka
willliam waxba kama badalaayo hadafka SD,GA
lkn Jimcaaloow William 22 jir mase 23 aw jiraaaa?
September 27, 2011 at 14:12
wa fikrad fican haduu waxkaqabanayo arimaha dhalinyada fikirka nacaybka haduu kasolabtay mel fican bad isku xausustay ban orankara dhalinyaradu wa kubahnatahay runtii wa figrad ad u wangsan william 23 jir ayu qoraya jornalku jimcale iyo jornalka kee xas ah ha ubixn wa isku dhawdahay 22 23 wel com william dhalinyarada wakubahnatahay sd na iska ba ba a nacayb ma ficne